Indlela yokukhulisa i-alo kwiimeko zekhaya
Phakathi kwezityalo zendlu, edume kakhulu yi-alo. Kulowo nalowo kuthi, uyaziwa ngokugqithisa nokubonakala kwayo. Bambalwa abantu abajika le ntyatyambo ukuyihlobisa indlu, ngokuqhelekileyo ikhula njengamayeza aphilileyo. Kwinqaku elithi "Indlela yokukhulisa i-alo kwiimeko zekhaya" siya kukuxelela indlela onokukhula ngayo kwaye ufunde indlela yokuyisebenzisa ukukhusela izifo ezithile. Ngako oko, ibukeka njenge-nondescript, kodwa inokukhenkca ifestile yakho, kuphela kufuneka ukwazi ukuba uyinyamekele njani kwaye uyayazi zonke iimfuno zayo. Yaye xa ufunda ukunyamekela kakuhle, kuya kuba nefuthe elihle kwiipropati zokuphilisa ze-aloe.
Kukho abameli abangaphezu kwama-300 bentsapho yaseAloe. Le nto ingaba zihlumela, ingca engapheliyo, ngamanye amaxesha imithi efikelela kwisiqithana somthi ukuya kwiimitha ezimbini kunye nokuphakama kwama-15 emitha. Bonke abahlali beentlango ezishushu. Ijusi iqokelela kumaqabunga awo, kwaye ngenxa yempahla yabo emangalisayo, yazisa ukuthandwa kwesi sityalo. Endle, i-aloe ikhula kwiPeninsula yaseArabia, eMadagascar naseAfrika. Yaye ndiyabulela kumntu ngoku unako ukudibanisa ama-aloe eCentral America, Asia, e-Yurophu yaseYurophu.
Ukuphilisa kakhulu kunye nommeli ohloniphekileyo wesihlahla se-alo, esi sihlobo sethu senkulungwane. Sekuqaleni kwekhulu le-4 BC, ijusi ye-aloe yasetyenziswa njengeyeza. AmaYiputa ayesebenzisa ijusi le-alo ekulungeni. Njengoko umxholo uthi, emva kokuba isidumbu sikaYesu sithathwe emnqamlezweni, saxutywa nge-resin enomnandi ehlabathini kunye nejusi le-aloe. UCleopatra wayibonga i-aloe juice ngenxa yobuhle bayo obuhle. Abantu abavela kwisizukulwana ukuya kwisizukulwana badlula iindlela zokupheka ezimnandi kunye nempilo, kwaye kaninzi siba ne-aloe emizi kunye nothuli kwifestile. Sebenzisa iziphephelo zakhe ezilula, kwaye uya kuqonda ukuba esi sityalo sixabisekileyo.
I-Stoletnik ingathobeki, kulula ukunyamekela kuye, kufuneka ube nolwazi olulodwa lwesiseko, uthanda ukukhula ngaphandle kommelwane, nokuba yedwa.
Aloe uthanda indawo ekhanyayo, kodwa engathandi ilanga elikhanyayo, linokutshisa. Ehlobo, unokubeka i-alo kwi-balcony. Umhlaba kufuneka ube nekota yesanti, efanelekileyo ukuba ngumhlaba, udibanise ukulungelelanisa i-cacti. Ukunkcenkceshela akusikho rhoqo, kodwa kuyaphula. Ebushushu bomoya bee-degrees ezili-15 ukuya kuma-16, ukuphela kwendalo kufuneka kutyilwe ngexesha eli-2 kwiiveki ezimbini okanye ezintathu. Ingozi kuye ibolile iingcambu, kubalulekile ukuba kukho umlambo olungileyo, kwaye kufuneka ugwenywe, ukwenzela ukuba amanzi angangeni ekuphumeni kwamaqabunga.
Kucebisekile ehlobo ukunyusa i-alo nge-fertilizer epheleleyo, nangona oku akusiyo imbopheleleko. Ukuba uthe wanyusa i-aloe ngonyaka, kuya kuba nokwaneleyo kulazo izondlo ezikulo mhlaba.
Ntshengisa i-aloe ngoko, hlukanisa kuwo amaqabunga amaninzi okanye iinqununu zokuhluthwa. Nciphisa amaqabunga okanye amahlumela aphihliweyo iintsuku eziliqela, kwaye emva koko atyalwe kwindawo yokukhanya komhlaba. Ephakathi kwebhodi udinga ukwenza umgodi omncinci, uyigcwalise ngesihlabathi esinyamekileyo, uze utshale isanti kuwo.
Ukunyangwa kwejusi yenkulungwane
Ukuzaliswa ngokupheleleyo kunye nokulindelwa ixesha elide kwizifo ezininzi kusindisa unyango ngejusi. Le jusi iyandisa ukukhuseleka, iphucula isondlo, inokuphulukisa ukulimala kunye nokunyanzeliswa kwezenzo, isenzo se-antibacterial and anti-inflammatory.
Ijusi yemithi ekhaya lingafunyanwa kumagqabi aphakathi kunye namancinane esityalo esinesithathu okanye esine-4 ubudala. Ukuphucula impahla yokuphilisa i-alo, kufuneka ishiywe ngaphandle kokunisela iiveki ezi-2, ukusika amaqabunga uze ubambe kwindawo emnyama, kwishefu elisezantsi kwifriji.
Ukungcwaba ngokubandayo kwindlovu nganye ngamanzi ama-5 okanye ama-6 wejusi entsha, ezimbini okanye kathathu ngosuku. Kulula kakhulu, kodwa akuyi kunceda ngaphezu kokuhla kwamanzi.
Emva kokutshisa, pholisa indawo ebusayo yomzimba wakho ngamanzi, kwaye ngokukhawuleza ufake isicelo esikhwameni esibomvu sejisi le-aloe.
Emva kokuxubha amazinyo akho, thabatha kwaye ususe umlomo wakho ngepuniji yejusi, enokuhlaziywa ngamanzi. Unokutshiza iqabunga elitsha ude ijusi ye-aloe isasazwa kuwo wonke umlomo.
Ngokuqhawulwa ngophuko lokumva
Masithathe igramu yesantsi se-aloe, sixube nge-300 gram yobusi obufudumeleyo, masibekele usuku. Isiqulatho sifanele sagungqiswe rhoqo, emva koko sitshiswe kwaye sicoce. Thatha iyure enye ngaphambi kokutya kwase-5 okanye 10 amagremu.
Kwiinyanga ezi-1 okanye ezimbini, kufuneka uthathe ii-milligrams ezingama-20 ze-aloe ijusi amahlanu ngosuku. Ngaloo ndlela, i-metabolism kunye nemisebenzi yomzimba yomzimba iyaqhelaniswa.
Ukutshatyalaliswa kwonyango ngoncedo lwe-aloe juice, izifo ezifana nokuphuma kwegazi, ukukhulelwa, isifo se-bile, i-gall bladder, izifo zesibindi.
Kwi-cosmetology, ijusi le-aloe lisetyenziselwa ukuphatha i-acne kunye nokunciphisa ukuvuvukala. Kuyimfuneko ukuba udibanise ubuso kunye ne-tampon ehambelana nejusi, kwaye emva kwemizuzu elishumi elinesihlanu isebenzisa ukhilimu onomsoco ebusweni.
Ukulungiselela isilwanyana esikhulayo
Hlanganisa kwipunipoon ye-chamomile iintyatyambo, i-mint, amaqabunga omile, i-aloe juice. Dlulela lo mxube ngeglasi yamanzi abilayo kwaye ufune iiyure ezingama-2. Emva koko unqande ukunyuswa kwaye esikhundleni sokuhlamba unokususa ubuso bawo.
Ukwenza ukuba isikhumba sakho siphume ngokutsha, lungiselela imaski. Thatha iipuniwe eziyi-3 ze-aloe juice kunye neepuni ezintathu ze-cottage cheese, gubungela. Ngesikhumba esiluhlanjwe ngaphambili, sebenzisa le maski kwaye ubambe iminyaka engama-20 okanye engama-30.
Ngoku siyazi indlela yokukhulisa i-aloe ekhaya, sifunde indlela yokunyamekela ngayo kwaye uyisebenzise ukwenzela iinjongo zokwelapha kunye nezokucoca.
Izityalo zangaphakathi: i-medinilla
Indlela yokukhulisa i-gerbera enempilo kwimiyezo yakho
Iibisiki kunye nelime
Ubudlelwane obuhle kwintsapho eselula
Shish kebab kusuka kwingulube kunye neetamatati
Yintoni endiyenzayo ngexesha lam elikhululekile elikhulelwe?
U-Algal ukugubha ekhaya
Iibhendi zibukela ngeempawu zemidlalo - i-business luxury in gambling